दिल्ली कठिन मोडमा, नयाँ कप्तानले सन्दीपलाई आज खेलाउँला ? - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्ली कठिन मोडमा, नयाँ कप्तानले सन्दीपलाई आज खेलाउँला ?
काठमाडौं, वैशाख १७ । इन्डियन प्रिमियर लीग (आइपीएल) को ११ औं संस्करणमा आज नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टीम दिल्ली डेयरडेभिल्सले चेन्नई सुपर किंग्ससँग भिड्दै छ ।
नेपाली समयअनुसार राति ८.१५ बजे पुनेस्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएसन रंगशालामा हुने खेलमा चेन्नईलाई पराजित गर्ने रणनीतिमा दिल्ली रहेको छ । त्यसैगरी आफ्नो घरेलु मैदानमा दिल्लीलाई पराजित गर्दै आईपीएलको शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा चेन्नई रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस बिग ब्यास लिगः सन्दीपको टोलीका २ खेल बाँकी, प्लेअफ पुग्ने सम्भावना प्रवल
चेन्नई भारतीय राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तानसमेत रहेका महेन्द्रसिंह धोनी कप्तानीमा रहेको छ भने श्रेयस आइयरको कप्तानीमा दिल्ली रहेको छ । यसअघि श्रेयसको कप्तानीमा दिल्लीले कोलकत्ता नाइट राइडर्सलाई ५५ रनले पराजित गरेको थियो ।
दिल्लीको लागि यो खेल निकै महत्वपूर्ण छ । शुरुवाती पाँच खेलमा पराजय भोगेको दिल्लीलाई आइपीएलको अन्तिम ४ मा पर्नका लागि पनि अबको खेलहरूमा जित हात पार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
याे पनि पढ्नुस ग्लोबल टी-२०ः सन्दिपले पहिलो खेल गुमाए
दिल्ली अहिले आइपीएलको पुछारमा छ । ७ खेलमध्ये ५ खेलमा हार र २ खेलमा जित हात पारेको दिल्लीको ४ अंक रहेको छ । आइपीएलको शीर्ष स्थानमा भने सनराइजर्स हैदरावाद रहेको छ । त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा चेन्नई रहेको छ भने तेस्रो स्थानमा किंग्स इलाभेन पञ्जाब छ ।
याे पनि पढ्नुस पीएसएलः लाहोर ७ विकेटले पराजित, सन्दीप विकेटविहीन
नेपालका सन्दीपले अहिलेसम्म कुनै खेल पनि खेल्न पाएका छैनन् । अवसरको पर्खाइमा रहेका सन्दीपको आजको खेलमा पनि खेल्ने मौका निकै कम रहेको खेल विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
ट्याग्स: IPL, sandeep lamichhane, दिल्ली